Izvo Zvakanakisisa zveMarudzi maviri: Kutarisa muHusky Lab Mix - Inobereka
Izvo Zvakanakisisa zveMarudzi maviri: Kutarisa muHusky Lab Mix
Kuchengeta muchinjikwa kunogona kureva zvese dambudziko uye kupembera kunakidzwa. Kuve neakachenjera kwazvo uye anotamba Husky Lab musanganiswa, inonziwo iyo Labsky kana Huskador , ndiye muenzaniso wakakwana.
Muchikamu chino, isu tinokuratidza kuti nei iyi yakasanganiswa ichigona kuita chipfuwo chakakura iwe mhuri. Kana iwe uri muridzi mutsva iwe pachako, verenga kuti uwane rumwe ruzivo runonakidza nezve yako Husky Lab pup!
Kwakatangira iyo Husky Labrador Sanganisa
Chii chaizvo chinotaridzika seHusky Lab Mix?
Maitiro api andinofanira kutarisira kubva kuLab Husky Mix?
Nzira yekudzidzisa sei Lab uye Husky musanganiswa
Iyo Husky Lab yekusanganisa yekurovedza inoda
Kushambidzika uye mamwe matipi ekuchengeta yeLab Husky yako Mix
Ndechipi chikafu chandinofanira kupa yangu Husky Lab?
Dzimwe nyaya dzehutano hweHusky Lab inosanganiswa
Kuwana yako chaiyo Lab Husky musanganiswa
Dhinda kaviri dambudziko, riwedzere kunakidza!
Musanganiswa weHusky Lab musanganiswa we Siberian Husky uye a Labrador retriever . Zvinofungidzirwa, zvakaitwa nemaune mukati memakumi maviri emakore apfuura kuburitsa imbwa ine hushamwari hweLabrador uye kudzikama kwehunhu hweHusky.
Kunyangwe iri nyowani nyowani yekuwedzera kune iyo rondedzero crossbreeds kutenderera pasirese, iyo Huskador iri kuwedzerawo mukuzivikanwa pakati pevafudzi nevaridzi.
Iyo Labrador Retriever
Iyo Labrador Retriever (Lab) yakatanga kubva Newfoundland . Nhoroondo yaro sechizvarwa inoenda kumashure senge apo dunhu reCanada rakanga richiri koloni yeBritish.
Ivo pakutanga vakaberekwa kuti vashande se imbwa dzinoshanda . Kubva pazita ravo chairo, basa ravo guru nderekuti kutora matombo evaridzi vavo , ayo anowanzo kuve akaumbwa nemadhadha nehove. Izvi zvinotsanangura kuda kwaLabrador Retriever kwemvura.
Ungwaru uye hunhu hwakavimbika hwazviwanira ivo rudo rwevavhimi vazhinji nevabati vehove, zvichiita kuti Labradors shamwari yavo yavanofarira yekuvhima.
Kune rimwe divi, Siberian Husky anobva kunzvimbo dzinotonhora dze Siberia, Russia. Vakarerwa nemadzinza eChukchi kuti vashande sembwa dzinoshanda zvakare.
Huskies aibatsirwa zvikuru nawo kutakura , kunyanya mukukwevera masileti echikafu, huni, zvekushandisa, uye zvimwe zvinodikanwa zvakapoteredza ndima.
Dzakakurira mumamiriro emhuri, imbwa idzi dzakajairwa kuve dzakapoteredza vanhu; mumadzinza eChukchi, maHuskies aive akaenzana dzikama zvakakwana kuvimbwa navo pavacheche.
Kuuya kubva kuzvizvarwa zvemubereki zvakagara zvichizivikanwa kuti zvinoshanda mushe nevanhu, musanganiswa weLabrador Husky unovimbika zvakasarudzika wakakomberedza vanhu, futi.
Pakati nepakati pakukura muhukuru, Husky Lab-yakakura musanganiswa inorema kutenderera 40 kusvika 60 lbs (18 kusvika 27 kg). Vanogona kukura kubva 20 kusvika 23 inches (50 kusvika 59 cm) pakukwirira.
Mazhinji eaya mazambuko ane kutaridzika kutarisika nekuda kwavo majasi mazhinji-mavara .
Kana iine akawanda emajini eSiberian Husky, musanganiswa weLab-Husky unogona kunge uine mavara ehembe agouti, piebald, kana mhangura , pakati pevamwe.
Huskador iyo inosendamira kurutivi rwayo rweLabrador Retriever inogona kuva nejasi re yero, nhema, kana chokoreti .
Chimwe chirevo chinoita kuti musanganiswa weLabrador Husky ubude ndewawo ruvara rwemaziso.
Kazhinji, iwe unogona kuwana Husky Lab inosanganiswa nemeso eruvara kana ebhuruu, asi ivo zvakare vanogona kuwana peya yemeso ane mavara akasiyana, mamiriro anozivikanwa se heterochromia .
Nzeve dzaHusky Lab dzinosanganisa dzinogona kuve dzakatwasuka (dzakagara nhaka kubva kuHusky) kana kupunzika pasi (seLabrador).
Nyaya yakajairika inouya nekutora muchinjikwa ndeyekuti iwe kazhinji waisazomboziva zvaunotarisira kana zvasvika kune hunhu hwehunhu nehunhu. Musanganiswa weSiberian Husky Lab haisi yakasarudzika kune izvi.
Labrador Retrievers uye Siberian Huskies vane zvakawanda zvehunhu zvakafanana. Semuenzaniso, kuva imbwa dzinoshanda, aya marudzi maviri ari akangwara uye anodzidziswa zvakanyanya . Zvakachengeteka kutarisira kuti imbwa yako yeHusky Lab ichave nehunhu hwakafanana.
Kufanana nevabereki vavo, maLabskies akasikwawo akavimbika uye zvinodzivirira yemhuri dzevanhu.
Usavimbe navo sembwa dzinorinda, zvakadaro, sezvo aya mazambuko achiwanzo kusava nehanya nevanhu vausingazive . Ichi chinhu chavanotora nhaka kubva kuSiberia Husky.
Mazhinji maLab-Husky anosanganiswa anogara nhaka yeLab iri nyore uye kutamba kwaHusky. Aya mahybrids ari gara wakakwira nguva yekutamba , izvo zvinoita kuti vave shamwari huru dzevana uye dzakanaka mhuka dzinovaraidza dzemhuri zvakazara.
Nehukuru hwembwa iyi, zvakadaro, zvakakosha kuti utarise mamiriro acho panguva yekutamba. Iyo Huskador inogona netsaona kugogodza mwana mudiki panguva yakaoma-dzimba.
Dzimwe nyaya dzehunhu dzaunoda kutarisa
Ivo vaviri Huskies naLabradors vane mugove wavo wakaenzana wehunhu husingadiwe hunosanganiswa neHusky Lab musanganiswa. Nhau dzakanaka ndedzekuti hunhu uhwu hunogona kugadziriswa zviri nyore nekudzidziswa kusingagumi.
Semuenzaniso, seLab, iyo Lab-Husky hybrid inogona kuratidza kushingairira mukati kutsenga pazvinhu . Usati wavanza shangu dzako neslippers kure, edza kupa imbwa yako yake yega chew toy.
Vamwe maHuskadors zvakare vane chishuwo chisingadzoreki chera kumativi. Ivo vanowana hunhu uhu kubva kuna Husky, iyo ine yakasikwa zvisikwa yekuzvigadzirira pekugara payo yega kana kuvaka dura rechikafu chayinovhima.
Imwe nzira huru yekuchengetedza Husky-Lab yako yakasanganiswa kubva pakuparadza gadheni rako kugadzira kuchera nzvimbo . Zadza kona yeyadhi yako nevhu kana jecha uye dzidzisa imbwa yako kugutsa hunhu hwake hwekuchera chete munzvimbo ino.
Kupa imbwa yako kurovedza muviri zvakakwana uye kumuchengeta akabatikana nemitambo nematoyi zvinozovatadzisa kubva pakuda kuchera kana kutsenga.
Kana zvasvika pa kurovedza , mbwanana yeHusky Lab inogona kuvimbwa nayo kudzidza nekukurumidza. Mamwe maHusky Labs ari kunyanya kuda kudzidza saLabrador, nepo vamwe vane tsika yekuyedza kushivirira kwako nekuti vanogona kunge vakaomesa musoro kana kusaenderana saHusky.
Nzira inoshanda kwazvo yekuti uyu muchinjikwa ateerere kumirairo yako ndeyekumisikidza rako basa se alpha . SaHuskies, idzi dzakauchikwa zvipuka zvemhuka zvinoda kuve nemutungamiri wekutevera.
Unogona kudzidzisa imbwa yako pachako uchishandisa nzira dzakasiyana senge kusimbisa kwakanaka . Izvi zvinowanzo shanda zvakanyanya kuLabskies, sezvo ivo vane shungu yekufadza muridzi wavo.
Kuva nembwa yako ichidzidzira kuraira uye kugona mashoma ekunyengedza inopa yako Husky-Lab kusanganisa kukurudzira kwepfungwa kwainoda, saka inogona kudzivirira kufinhwa , iyo inotungamira kune hunoparadza maitiro.
Kufambidzana zvakare chikamu chakakosha pakudzidziswa uku nekusanganiswa. Nhau dzakanaka ndedzekuti imbwa iyi ine hushamwari hunhu hunobatsira kuti iwirirane nedzimwe mhuka.
Imbwa yako inozobatsirwawo nekuratidzwa kune dzakasiyana siyana kurira, hwema, uye zvinotaridzika pachiri mwana. Izvi zvinobatsira ne kushushikana uye dzidzisa imbwa yako kudzikama mumamiriro asina kujairika.
Tichifunga nezve kumashure kwekuvhima kwevabereki vayo, iyo Huskador ine masimba emhando yepamusoro ayo anoda kusangana neekisimbisaizi. Uku kuyambuka kunoda kweinenge awa yekurovedza muviri zvine simba zuva nezuva.
Kufamba, kukwira, jogs - zvese izvi zviitiko zvikuru zvekubatsira kupisa kuburikidza nezvitoro zvemagetsi zveLab Husky. Idzi imbwa dzichada kushambira, zvakare, zvichipiwa zvakapfuura zveLabrador semvura inodzosera mvura.
Iwe unogona zvakare kurega iwe imbwa yakasununguka nekuvarega mhanya uchitenderera-leash munzvimbo ine nzvimbo, taura mupaki yembwa.
Kana zvasvika kune Husky Lab yekusanganisa zvido zvekurovedza muviri, mafurati asina yadhi yakakomberedzwa anogona kunge asiri iwo akakodzera nharaunda. Usaora mwoyo, zvakadaro; ichi chinoyambuka chinofara chero kwachinogara chero bedzi chichifamba chero kamwe chete pazuva.
Kwemazuva pausingakwanise kuvaregedza vachifamba, unogona kuwedzera mitambo senge kutora kune yavo rondedzero yezviitiko. Mitambo yemukati inzira yakanaka yekuchengeta maHuskadors akatarisisa uye akabatikana.
Tarisa uone uyu weLabsky puppy uyo anonyatsogutsikana kutamba nepfupa:
Pane chinhu chimwe icho vazhinji varidzi veiyi imbwa vanobvumirana uye ndicho chokwadi chekuti iyo Siberia Husky Lab inosanganisa sheds zvizhinji .
Iwe unogona kutarisira mwaka wayo wekuteura kanokwana kaviri pagore, panguva chirimo nekudonha . Iwe unogona kutenda ese ari maviri Lab uye Husky yeiyo Labsky's gobvu-yakatetepa jasi.
Munguva yekudonhedza mwaka, iwe unoda kukwesha jasi rembwa yako zuva nezuva kuchengetedza kudeura kuri pasi pesimba. Kunze kwemwaka uno, kukwesha kunofanirwa kuitwa kaviri pavhiki .
Chengetedza mari mukushongedza maturusi akadai sejasi rejasi uye yakakora, zvakare, kuti zvipfeko zvako zvisununguke kubva kune vhudzi rembwa. Kubvisa imba yako kana imbwa yako yekutamba nzvimbo zuva nezuva zvinokurudzirwa zvakare.
Kufambirana neyavo utsanana hwemazino zvakare inofanirwa, kunyanya sezvo iyo Huskador iine tsika yekutsenga. Geza mazino embwa yako kamwe chete pazuva kuti udzivise kuora kwemeno nekufema kwakaipa.
Lab Husky sanganisa vana vanofanirwa kupihwa chikafu kanenge 1.5 makapu ehupamhi hwembwanana chikafu , yakakamurwa kuita matatu kusvika mana kudya pazuva. Kana vasvika pamwedzi wavo wechitanhatu, unogona kutanga kuvapa zvekudya zviviri chete pazuva.
Ita shuwa kuti iyo chikafu wako Huskador anodya akapfuma mumapuroteni, makabhohaidhiretsi, mafuta, uye mavitamini. Yakakwira-mhando sosi yemapuroteni senge nyama yemhasuru kana nyama yenhengo inobatsira kusimbisa imbwa yako mapfupa nemajoini, uye mafuta anobatsira kuchengetedza masimba ake esimba.
Iwe unogona kumuisa pane premium yakaoma kibble nekukurumidza paanotendeuka imwe uye kuwedzera ake servings ku 2 ½ makapu ebibble zuva nezuva, rakakamurwa kuita kudya kwechipiri.
Muchinjikwa weSiberian Husky Lab une avhareji hupenyu hwese ane makore 11 kusvika ku13 , asi nyaya dzakasiyana dzehutano dzinogona kutapudza iyi tarisiro yehupenyu ipfupi.
Nekuda kwemadziva ayo akasiyana ejeni, kusanganisa kwaLab Husky kunoitika kune akati wandei nyaya dzehutano . Ose Labrador Retrievers uye maSiberia Huskies ari panjodzi zvakanyanya kune mamwe mamiriro ehutano, saka unogona kutarisira kuti Lab Husky wako agare nhaka matambudziko aya futi.
Exercise-Inoitisa Kupunzika (EIC)
Ichi chiitiko cheakawandisa chinokonzeresa imbwa dzinokanganisa kurasikirwa nemhasuru nekudonha mushure menguva yekurovedza muviri kwakanyanya.
Kudya kwehukama uye mwaka wemukume kurwara
Chenjerera zviratidzo zvakadai sekutsvuka kwakakomberedza nzvimbo yemhino, ganda rinonzwika, kunanzva zvakanyanya, kurasikirwa nevhudzi, uye kuzvimba makumbo. Tora Huskador wako kun'anga kana waona zviratidzo izvi.
Ichi chirwere chinogarwa nhaka chinowanzoonekwa muimbwa hombe. Kana imbwa ine hudyu dysplasia , masokisi avo akabatanidzwa muhudyu haana kunyatsogadzirwa, zvichiita kuti arwadziwe kufamba kana kutenderera.
Yakanaka Caudal Myopathy
Ichi chirwere chetsandanyama chinokonzerwa nekukuvara mumhasuru yemuswe - chinowanzoitika chirwere pakati pembwa dzinoshanda.
Iyo yakaoma-conjunctivitis kerata
Varidzi vezvipfuyo vaiwanzo kudaidza chirwere ichi 'ziso rakaoma'. Imbwa dzinotsva dzakakora corneas nekuda kwekushaikwa kwehunyoro mumaziso.
Ichi chirwere chinogona kuwanikwa kazhinji imbwa dzakura. Musana wavo wepelinha unoderera, uye, semhedzisiro, vanorasikirwa nekubatana uye kufamba munzvimbo yekumashure. Imbwa dzine degenerative myelopathy dzinogona kubatsirwa netambo uye ngoro dzembwa kana dzikarasa kugona kwadzo kufamba.
Makaraketi chimwe chirwere cheziso chinogona kukanganisa zvakanyanya chiono chembwa - chinogona kutotungamira kuhupofu. Chirwere ichi chinowanzo kukonzerwa nekuchembera. Inogona zvakare kuve yakabatana ne chirwere cheshuga muimbwa , saka kuenzanisa kudya kweshuga kwembwa yako mukudya kwayo kunofanirwa kutorwa zvakanyanya.
Idiopathic pfari dzinowanzoitika muSiberian Husky. Kufenda kana pfari imbwa inogona kukonzerwa nekuputika kusingawanzoitika kwemagetsi muuropi hwembwa.
Laryngeal kuora mitezo
Zvakajairika kuti imbwa hombe dziwane mamiriro aya. Inogona kukanganisa kugona kwavo kufema, asi inogona kurapwa nekuvhiya.
Dzimwe nyaya dzakajairika idzo vaviri Labrador naHusky vabereki vangapfuudza pasi kune avo Husky Lab vana vari kufutisa , nyaya dzemazino , uye arthritis (chiitiko chekuneta).
Sezvineiwo nechero rakayambuka, Labrador Huskies inoda imwe yekuwedzera kuchengetedzwa nekutarisirwa. Ita shuwa iyo Huskador puppy iwe yaunounza nayo kumba yanga iri hutano-hwakaedzwa uye kubviswa kwemagene mamiriro.
Kana iwe uri wekubata nemuberekesi wako wekutanga Lab Husky puppy, iwe unofanirwa kuchengetedza kugara uchikurukurirana. Usazeze kuita bvunza mibvunzo , kunyanya nezvehutano hwevabereki.
Edza nepaunogona napo kutsvaga muberekesi uyo anokutendera iwe kuti ucherechedze vabereki uye mwana wacho pachayo usati waendesa yako Huskador kumba.
Gara kure nevatengesi vanopa zvipenga zvekutengesa. Sezvo iwe ungatoziva kare, maLab-Husky musanganiswa anogona kudhura kutarisira. Kana iwe uchida kushandisa mari, unogona zvakare kuishandisa pane mbwanana kubva vafudzi vane mukurumbira izvo zvinogona kukupa iko kutarisisa kuri pamutemo kwembwa yako nhoroondo yegene.
Nekuwedzera kwekurumbira kweiyo Husky Lab musanganiswa, mutengo wayo unogona zvakare kukwira kumusoro mumakore anotevera. Parizvino, mutengo weLab Husky wembwanana uripo $ 400 kusvika $ 800 imwe neimwe.
Lab Husky vafudzi uye nzvimbo dzekununura
Lab Husky vafudzi vanogona kunge vakaoma kuwana, saka unogona kusvika kune vafudzi veRabs neHuskies pachinzvimbo.
Bata nevabatsiri ava kuti uone kana vaine Husky Lab sanganisa mbwanana dziri kutengeswa :
Smith Mapurazi Labradors (Minnesota)
Iwe unogona zvakare kuyedza kubvunza nyanzvi dzemuno senge veterinarians uye makirabhu ekuberekesa kune mazano pane vafudzi vane mukurumbira munharaunda yako.
Kana mutengo weHusky Lab pup kubva kumuberekesi wakanyanya kukukwira, iwe zvakare une sarudzo yeku kutora kana kununura a Huskador. Kunze kwemutengo wakaderera, kutora iyo imbwa hombe zvinogona zvakare kuve nyore, sezvo iwe usinga sangana ne kudzidziswa mbwanana.
Heano mamwe masangano ekudzikinura uye dzimba dzekugara dzakatsaurirwa kune dzakasiiwa Labs uye Huskies Unogona kutaura navo kuti uone kana vaine chero vakuru maHuskadors anowanikwa kutorwa.
Labrador Retriever Kununura kweFlorida
Maodzanyemba Ekumusoro Labrador Kununura uye Kugamuchirwa (Alabama)
Kununura Arctic (Utah)
Husky Imba (Nyowani Jersey)
Dhinda kaviri dambudziko, peta kunakidzwa
Musanganiswa weHusky Lab hauna kutengeka semamwe mazambuko nhasi, asi inokodzera peni yega yega.
Ichi chemasanganiswa chiri anodikanwa uye akangwara imbwa inogadzirira yemhuri yakanaka chipfuyo uye shamwari.
Iine yavo inoshanda imbwa nhaka, maLabsky anogona kudaro nyore kudzidzisa , asi uchafanirwa kuzvimisikidza se alpha yepakeji. Kudzidziswa kwakaringana uye kudyidzana nevamwe kwakakoshawo mukudzidzisa imbwa iyi hunhu.
Gadzirira kuve nezvakawanda anoshingaira mararamiro , zvakare, sezvo Lab neHusky muchinjikwa inoda ingangoita awa yekurovedza muviri zuva nezuva.
Une yako Husky neLab hybrid kumba? Izvo zvimwe zveLabrador Retriever kana Husky yeSiberia? Goverana zvakaitika zvako nesu mune zvakataurwa pazasi!
Chirungu Lab: Gwaro Rakazara Kune Ino Ratidza-Mhete Labrador Retriever
8 Border Collie Musanganiswa: Yako A kusvika Z Zano reCollie Sanganisa Zvibereko
Iyo yakanaka White White Mufudzi imbwa mune inoonekera
Boxador - Chese chinhu icho Muridzi Anofanirwa Kuziva Nezve Bhokiseni Lab Lab Musanganiswa
Nhema Pomeranian: Gwaro Rizere KuJet Nhema Pom
Mufudzi wechiGerman Pitbull Sanganisa: Yekukurumidza Kuongorora
Papillon Imbwa Inobereka Ruzivo
Wako mutungamiri kune anoshanda nesimba Toy Poodle
Nei iyo Havapoo yakakodzera zvakakwana kune wese muridzi wembwa
Komondor Imbwa Inobereka Ruzivo & FAQs
Iwe une simba rakaringana neAustralia Mombe Imbwa?
Bullypit: Ko iyo American Bulldog Pitbull inosanganisa yako mhando imbwa?
red toy poodle yakazara
rottweiler musanganiswa nepitbull puppies
yakawanda sei mini australian shepherd
mifananidzo yezvitsitsinho zvitsvuku imbwa
mazita echokoreti lab